Bee ngwaahịa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Bee ngwaahịa
N'ọnọdụ ndị a na-ewere jelii eze, ntụziaka maka iji na dose
Ọtụtụ ndị anụwo ugboro ugboro banyere ụdị ihe ndị dị otú ahụ pụrụ iche, dị ka jelii eze. Ngwa a na - ama aha a - "jelii eze". Royal jelii bee - gini bu ya? Ndepụta a bụ ihe nzuzo zoro ezo nke glands nke ndị ọrụ aṅụ bi na ekwo Ekwo. Ọ na-emepụta ụmụ ahụhụ ndị dị 5-15 ụbọchị.
Otu esi achikota anu ozo, ihe umu anu
A na-ejikarị venoma eme ihe dị ka ọgwụ nke dị irè. N'eziokwu, ọ dị mkpa iji nchịkọta ma jiri ohia mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ihi na, ma e wezụga ịgwọ ahụ, ọ nwere ike imebi ya. N'okpuru ebe a, anyị na-ekwu banyere uru nke anu anu na otu esi eji ya. Kedu ihe ọ na-eme ma ọ bụrụ na ọ na-eri gị, ọ ga-esiri gị ike ịhụ nsí ya, n'ihi na ọ na-ekpughe ya n'okpuru akpụkpọ gị na obere obere - naanị 0.2-0.8 mg
Ụdị ụdị anụ ọhịa, nke ụmụ mmadụ ji eme ihe
N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ngwaahịa bee, nke ndị mmadụ na-eji eme ihe n'ọtụtụ ebe. Anyị ga-agwa gị ihe merva bụ na beekeeping, ihe dị mkpa nke anu venom na drone mmiri ara ehi, na-agwa gị ihe bactericidal Njirimara waks nwere. Ị ma? Aṅụ bụ ụdị ụdị beps.
Mgbe na otu esi eme ka jelii eze na-akpọsa ozi ọma
Onye ọ bụla maara banyere uru nke anụ anụ ndị ọzọ, dị ka mmanụ aṅụ na propolis. E nwekwara ụdị ngwaahịa ndị aṅụ na-eme dị ka jelii eze. Nke a bụ ngwaahịa ọgwụgwọ eji ọgwụ na cosmetology. Anụ na-emepụta ya maka ịzụ akpanwa ma na-eto eto. Umu nke ndi na-aru ugwo na-enweta mmiri ara ehi eze ya bu nani ubochi ato nke ndu ha, nke bu 60-80.
Mkpụrụ mmanụ coriander bara uru, ike gwọọ mmanụ aṅụ cilantro
Coriander (lat. - Coriandrum) bụ otu osisi herbalceous etromaslennoe kwa afọ. Ọtụtụ ndị maara coriander n'ihi mkpụrụ ya, nke a na-eji dị ka nri nri aromatic, ma ọ bụ n'ihi na ị ga-esi na ya, nke a na-akpọ cilantro (quinda) ma jiri ya mee ihe dị ka ogwu ahịhịa. Kedu Coriander dị ka mmanụ aṅụ, na-enye ezigbo mmanụ aṅụ na-edozi ahụ.
Gịnị mere mmanụ aṅụ phacelial bara uru?
O siri ike iche na ihe oriri na-aba uru ma dị ụtọ karịa mmanụ aṅụ. E nwere ụdị mmanụ aṅụ dịgasị iche iche, nke ọ bụla nwere ihe ndị pụrụ iche ọ nwere. Otú ọ dị, ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ihe ndị dị oké ọnụ ahịa n'ịgwọ aṅụ na nkà mmụta ọdịnala nwere ọgwụgwọ kachasị mma. Nke a bụ kpọmkwem ụdị mmanụ aṅụ na phacelia.
Njirimara bara uru nke ire wax, eji na contraindications
N'agbanyeghi eziokwu bu na anu mgbochi bu onye iro kachasi elu nke ndi anu ulo, mgbe ufodu ndi na-ebibi ihe ndi ozo, na ndi mmadu ndi ogwu, a na-eji ogwu a eme ihe dika uzo iji luso oria nta na omuma. N'okpuru ebe a, anyị lebakwu anya na peculiarities nke ọgwụgwọ na tin moth tincture. Moth tincture: nkọwa Akwukwo anu, ma obu anu anu, bu anu kachasi egwu nke anu anu ulo, ebe obu na ha di na ya.
Na ntụziaka nke nkà mmụta ọgwụ ọdịnala na-eji mmanụ aṅụ eme ihe, a na-akpọkarị lime. Ọtụtụ ndị anwalela ya, ma ọ bụghị mmadụ niile maara banyere iche iche nke ngwaahịa bee. N'ihi aro na-esi ísì ụtọ, acha ọcha na-acha ọcha na agba odo na ihe na-enweghị atụ, a na-ewere mmanụ aṅụ na-agụ mmanụ dị ka ihe kachasị mkpa nke ụdị mmanụ aṅụ ọ bụla.
Ojiji nke beeswax na nkà mmụta ọgwụ na omenala: uru na nsogbu
Ịzụ aṅụ nyere ndị mmadụ ọ bụghị nanị na mmanụ aṅụ, kamakwa ya na ụdị ihe dị otú ahụ dị ka wax. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akwa emo na ọ ghọrọ onye mbụ polymer kere eke. Ọbụna n'oge ochie, ọnyá ha kpuchie, ndị dike nke akụkọ ifo Gris oge ochie maara nke ọma ihe a dị ebube nke ịzụ aṅụ. Ya mere, Odysseus ji ya kama nke earplugs maka ìgwè ya iji chebe ya site n'ịbụ abụ sirens, Daedalus si Icarus nye ya nku ya.
Ụzọ kachasị mma iji nwalee mmanụ aṅụ maka ezi
Mmanụ aṅụ bụ ihe dị oké ọnụ ahịa, a na-ejikwa ya ọ bụghị nanị na nri edozi, kamakwa na nkà ọgwụ na cosmetology. Iji mee ka aru ya dị mma, onye kwesịrị ịṅa ntị n'oge ịzụta ya. Kedu ka esi lelee mmanụ aṅụ? Azịza nye ajụjụ a dị mfe. Nsonaazụ kachasị mma ga-enye nyocha nyocha.
Uzo esi eji mmanu anu anu, ihe bara uru na ihe ndi mmadu mere
Otu n'ime ihe dị iche iche ma ọ bụ dị ezigbo mma na ngwaahịa nke ịkpa aṅụ, nke aṅụ nke ọma kwadebere si pollen bụ anu pollen. A matawo uru nke ngwaahịa a na nkà mmụta ọdịnala ruo ọtụtụ narị afọ. Chee echiche ihe a na-ahụkarị, ihe bara uru ọ nwere na otu esi ewere ya n'ụzọ ziri ezi.
Ihe ntanetị anụ: otú e si emetụta ịkpa aṅụ
Ọtụtụ ndị na-aṅụ aṅụ na-eche otú e si agbaze wax na obere oge na ego. N'otu oge ahụ, ịbanye n'ime ọchụchọ maka usoro dịgasị iche iche, enwetaghị ihe a tụrụ anya ya. Ọ bụ ya mere o ji baa uru ịtụle okwu a n'ụzọ zuru ezu karị. Njirimara nke iji ngwaọrụ na aṅụ aṅụ Nchacha anụ - otu n'ime ngwaọrụ ndị na-akwado ọrụ ahụ na apiary.
Esi esi esi nri na vodka n'ụlọ: Ezi ntụziaka
Ọtụtụ n'ime anyị na-eche na mmanya aṅụ bụ nanị vodka, nke a na-agbakwunye mmanụ aṅụ. Mana echiche a kachasị njọ. Nke bụ eziokwu bụ na nkwadebe nke ihe ọṅụṅụ ahụ na-agụnye mmanụ aṅụ ma na-eme ka mmiri sie ike, ọ bụrụ na mmanya ahụ agwụchaa, ihe ọṅụṅụ mmanya na-aba n'anya anaghị aba pasent 16.
Nri mmanụ aṅụ: ihe bara uru, ngwongwo chemical na contraindications
Nri mmanụ aṅụ bụ obere anụ, ụdị dịgasị iche iche nke anaghị adịkarị ahịa. Otú ọ dị, o kwesịrị ka a na-enye ya otuto maka uru ya bara uru. N'ịbụ onye na-agwọ ọrịa n'ezie, ọ na-enwe mmetụta dị mma n'ahụ ahụ mmadụ, ihe o mejupụtara nwere àgwà dị iche iche.
Kedu ihe bụ zabrus na ịkpa aṅụ na otu esi emeso ha
Ebe ọ bụ na n'oge ochie, ndị mmadụ na-eji ngwaahịa bee maka mkpa ha. A na-eji mmanụ aṅụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ sitere na ya na-eri nri, eji agwọ ma gbochie oyi. Otu n'ime ihe ndị kasị baa uru ma dị iche iche a na-enye anyị site na okike na anụ ụlọ bụ zabrus. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa banyere ọdịiche a pụrụ iche nke okike na otu esi etinye zabrus n'ụzọ ziri ezi.
Kedu mmanụ aṅụ na-acha ọcha
Ọ bụghị ndị niile na-ahụ maka mmanụ aṅụ na-achọpụta na e nwere otu ihe dị iche iche dị ọcha nke ngwaahịa a bara uru, nke nwere ọdịiche pụrụ iche, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a, chọpụta otú mmanụ aṅụ dị ọcha si dị na ihe ọ na-eme, ma nyere aka ịmata ọdịiche dị iche iche sitere n'aka ezigbo ngwaahịa. Nri na ọdịdị Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka otu anụ nchara dị ọcha nke na-enweghị ihe ejiji na ntinye, ọ ga-enwe ure dị arọ, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịmanye aṅụ iji nakọta nectar nanị site na osisi ndị kachasị mma.
Esi agbaze mmanụ aṅụ?
Ọ bụrụ na ịchọta na mmanụ aṅụ mmanụ aṅụ, ị kwesịrị ịmara na ọ bụ nri zuru oke. Naanị ya ga-agbaze nke ọma. Na otu esi eme ya, anyị achọpụtala ugbu a. Akụkụ nke agbaze Ọtụtụ ugboro na anoghi n'ulo oba enwere ufodu nke ngwaahịa, nke bu candied na freezes. Ndị mmadụ na-ekwu, sị: "Na mmanụ aṅụ adịghị njọ, nke a na-adịghị aṅụ ya."
Gịnị mere ị ga-eji were mmanụ aṅụ sainfoin?
Esparcet bụ ahịhịa na-eto eto nke osisi nke legume. Ọ na-ebi n'akụkụ mpaghara, mpaghara, ala ahịhịa, na oke ọhịa, karịsịa na Central Ukraine na Russia. Ọ bụ site n'aka ya ka a na-amịpụta mmanụ aṅụ na-achọpụta nke ọma, bụ nke ndị Europe ji kpọrọ oké ọnụ. Ndị na-aṅụ aṅụ si n'akụkụ nile nke ụwa na-eji osisi mmanụ aṅụ espartset akpọrọ ihe maka elu ya nke dị elu nke na-adị elu nke ọma na ọtụtụ ọnụọgụ bara uru.
Gịnị nwere ike mmanụ aṅụ?
Ka mmanụ aṅụ na-ebuli elu n'etiti anụ ndị ọzọ. Ọ kachasị ewu ewu n'ihi na ọ nwere uto magburu onwe ya na ọnụ ọgụgụ bara ụba nke ihe bara uru. Isiokwu ahụ ga-agwa gị ihe mmanụ aṅụ mmanụ aṅụ bụ na May, na ihe kpatara ya ji dị oké ọnụ ahịa. Nri na ọdịdị Nkpọrọgwụ na-eme ka mmiri dị ọcha nwere ụdị mmiri mmiri.
Kedu ihe mere ị ga-eji aṅụ mmanya?
Taa, e nwere ihe dị ka ụdị mmanụ aṅụ iri abụọ, ma ọ bụ naanị otu onye a na-ewere na ọ bụ onye Russia, dịka ahihia willow si na osisi (aha ọzọ bụ Kiprey), nke na-eto n'ókèala Urals na Altai. Mmanụ aṅụ (ọcha) bụ ihe okike nke nwere ọtụtụ aha, onye ọ bụla na-egosipụta àgwà ya.